China mpanamboatra perforated tontonana-YA313 mpanamboatra sy mpamatsy | Yingjiwei
Endri-javatra ny tontonana perforated aluminium
1. Mora ny manodina sy mamolavola
2. Azo nolokoina na nolefaka
3. Mora apetraka
4. Tsara tarehy
5. Ny hateviny sy ny habe isan-karazany
6. Fandraisana feo tsara
7. Safidy maromaro amin'ny aperture sy ny fandaminana
8. Mavesatra maivana
9. Fiainana maharitra
10. Haben'ny fanodinana mazava
11. Fanoherana mahery vaika
12. Sariaka amin'ny tontolo iainana, azo ahodina 100%.
Ny tontonana vita amin'ny perforated aluminium dia namboarin'ireo fitaovana matihanina tamin'ny CNC na tamin'ny fanapahana laser mba hamelezana ireo lavaka isan-karazany toy ny faribolana, ellipses, kianja, rhombus, hexagons, voninkazo plum ary lavaka hafa tsy misy olana. Aluminium perforated veneer, antsoina koa hoe vendrana alim-bovoka. Rehefa avy nanindrona karazana lavaka isan-karazany dia notsindriany tamin'ny milina niondrika. Ny velarana dia vita amin'ny florocarbon na fonosana vovoka, mba hisorohana ny takelaka aliminioma amin'ny fitrandrahana voajanahary, na hanaovana loko miloko isan-karazany ho an'ny fisehoana tsara tarehy, mba ho maro loko ny veneer aluminium, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny haingon-trano fananganana. ary ny vokany fanatsarana.
Izy io dia vokatra tsy dia misy tabataba sy fiasa haingon-trano. Mandritra izany fotoana izany dia manana ny mampiavaka ny fitaovana maivana, ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny harafesina, ny fireproof, ny hamandoana, ny shockproof, ny fitoniana simika tsara, ny endriny tsara tarehy, ny lokony kanto ary ny haingon-trano tsara indrindra. Izy io koa dia mahasoa amin'ny rivotra, fanaparitahana ny hafanana ary mampiditra hazavana bebe kokoa.
Anaran'ny vokatra Tontonana vita amin'ny perforated aluminium
Teo aloha: Aluminium tontonana-YA103
Manaraka: Tontonana voasokitra-YA204